ASOJ oo Hambalyo u dirtay Madaxda cusub ee SOLJA
Sunday July 31, 2011 - 02:03:17 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Associated Somali Journalists ASOJ ayaa hambalyo u dirtay Gudoomiyaha cusub ee Ururka Suxufiyiinta Somaliland SOLJA Mr Xasan Maxamed Yuusuf iyo dhamaan hoowlwadeenadda cusub ee sida dimoqoraadiyada leh loo doortay.
ASOJ waxay Gudoonka cusub ee SOLJA ku dhiirigelinee inay isu xilqaamaan sidii loo horumarin lahaa Suxufiyiinta iyo Saxaafadda Somaliland.
“Waxaan Hambalyo u dirayaa dhamaan Saxaafadda madaxabanaan ee Somaliland gaar ahaan gudoonka cusub ee SOLJA,Waxaana rajo weyn ka qabaa inuu Gudoomiyaha cusub Xasan Maxamed Yusuf oo ka mida Wariyeyaasha ugu caansan Somaliland ku dhiirado tilaabooyin wax ku oola si loo tirtiro Fadhiidnimadii lagu bartay hogaankii hore ee SOLJA” ayuu yiri Gudoomiyaha Isu taga Suxufiyiinta Somalia Mr Dahir Abdulle Alasow.
Shirweynaha 4-aad ee Ururka Suxufiyiinta SOLJA ayaa lagu qabtay Hotelka Ambassador ee Magaaladda Hargeysa,waxaana Gudoomiye loogu doortay Xasan Maxamed Yusuf halka Gudoomiye ku xigeena loo doortay Ibrahim Saleban oo loo yaqaan Ibrahim Gurey.
Xoghayaha guud ee SOLJA ayaa loo doortay Maxamed-Rashiid Muxumud Faarax.
Xubnaha Guddida fulinta ee shirweynaha SOLJA lagu doortay waxay kala yihiin, Barkhad Maxamuud Kaariye, Maxamed Cabdi Curad, Maxamed Jamaac (Caloolay), Maxamed Siciid Cabdilaahi (Xarago), Cali Jaamac Maxamed, Keyse Axmed Digaale, C/Salaan Xariir Sheekh Cismaan, Mustafe Sheekh Cumar Geeddi, Cali Aare, Nimco Samriye, Sahra Sh. Cabdi Wahaab iyo Maxamed Shaqalle.
Halkaan ka dhageyso Codbixintii doorashadda iyo habka dimoqoradiga
By Muna Oceana.